Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gelinkii dambe maanta la dilay.
on September 22 2013 Xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaaliya ayaa gelinkii dambe ee maanta lagu dilay agagaarka xarunta Villa Baydhabo ee magaalada Muqdisho, iyadoona kooxdii dilka ka dambeeysay ay halkaasi isaga baxsadeen.
Kooxo la sheegay inay ku hubeysnaayeen bistoolado ayaa dhowr rasaas la dhacay xildhibaankaan oo magaciisa lagu sheegay Xuseen C/salaan, xilli uu kasoo baxay Jaamacada Muqdisho oo uu wax ka baranaayay.
Goobta uu dilka ka dhacay ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka tirsan nabad sugida iyo booliiska, waxaana ay halkaasi ka sameeyeen howlgalo baaritaano ah oo ilaa iyo haatan la ogeyn cida lagu soo qabqabtay.
Sidoo kale ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda dilka xildhibaanka, waxaana uu dilkaan qeyb ka yahay dilalka iyo amaan xumida mudooyinkii dambe kusoo badaneeysay magaalada Muqdisho.
Allaha u naxariistee marxuum Xuseen C/salaan ayaa sida la sheegay maalinta berito waxaa lagu aasi doonaa magaalada Muqdisho, waxaana aaskiisa ka qeyb gali doona mas'uulyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya.